ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ် လောင်စာဆီမှားပြီး သင့်ကားမှာထည်.မိရင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ? – Nyi Ma Lay
ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ် လောင်စာဆီမှားပြီး သင့်ကားမှာထည်.မိရင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ ?
By Nyi Ma LayPosted on September 9, 2021
သငျဟာ ဓာတျဆီအငျဂငျြကားတစီးကို မောငျးနတေဲ့ ယာဉျမောငျးသူတယောကျဖွဈရငျဖွဈမယျ ၊ ဒီဇယျအငျဂငျြကားကို မောငျးနတေဲ့ ယာဉျမောငျးတယောကျဖွဈရငျဖွဈပါမယျ ။
သငျ့ကား ဆီဖွညျ့စဉျမှာ ဆီဆိုငျက ဓာတျဆီကားကို ဒီဇယျမှားထညျ.လိုကျမိတယျ ၊ ဒီဇယျကားကို ဓာတျဆီမှားထညျ.လိုကျမိတယျဆိုပါစို. ၊( ဖွဈခဲပမေယျ့ ဖွဈတော့ဖွဈတတျပါတယျ ) ၊ သငျကလညျး အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့ ဆီမှားထညျ.လိုကျတာမသိဘဲ ကားစကျနှိုးလိုကျမိတယျဆို သငျကားအငျဂငျြ ဘာတှဖွေဈသှားနိုငျမလဲဆိုတာကို သိပ်ပံနညျးကြ လကျတှေ.ကကြ ဆှေးနှေးတငျပွခငျြပါတယျ ။
ဆီမှားထညျ.တဲ့ ပွသနာဘာတှဖွေဈနိုငျတယျဆိုတာကို မသိခငျ ဓာတျဆီအငျဂငျြနဲ. ဓာတျဆီအငျဂငျြတို.ရဲ. မတူကှဲပွားတဲ့ အငျဂငျြတညျဆောကျပုံ မီးလောငျပုံလေးတှကေို သိထားရငျပိုကောငျးပါတယျ ။
ကနြျောအရငျရေးထားတဲ့ ပိုဈ့မှာ ရှာဖှဖေတျနိုငျပါတယျ ။ အခုတငျပွခငျြတာက ဓာတျဆီနဲ. ဒီဇယျဆီတို.ရဲ. မတူကှဲပွားတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှကေိုပါ ။
အငှေ.ပြံလှယျသညျ ၊ ပုံမှနျအပူခြိနျတှငျ လှယျကူစှာ အငှေ.ပြံသညျ ။ အရောငျမရှိ ၊ ထှငျးဖောကျမွငျနိုငျသညျ ၊ အနံ.အနညျးငယျသငျးပြံ.သညျ ။ မီးစတငျလောငျကြှမျးရနျ အနိမျ့ဆုံးသော အပူခြိနျလိုအပျခကျြ ( Flash Point ) = -10 to -15 ‘ C (or) 14 to 15 ‘ F နိပျသောသိပျသညျးဆ (0.60 to 0.78) ဆီနှငျ့ရာဘာထဲသို. စိမျ့ဝငျနိုငျသညျ ။
အပူခြိနျပမာဏ ( 9500 to 10500 Kcal / Kg 0r 4300 to 4800 Kcal / lb ) အေးနသေော အငျဂငျြကို စတငျနိုးခြိနျတှငျ လနှေငျ့ဆီရောနှောမှုလှယျကူစရေနျ လှယျကူသော အငှေ.ပြံစှမျးရညျရှိသညျ ။
ဒီဇယျသညျ အငျဂကျြရှငျးပနျ. ( Injection Pump ) နှငျ့ နျောဇယျ (Nozzle ) မြားအတှငျးခြောဆီအဖွဈဆောကျရှကျရသဖွငျ့ စေးပဈြပွီး ခြောဆီဂုဏျသတ်တိရှိရမညျ ။ ဆီနှဈခုရဲ. မတူညီတဲ့ ဂုဏျသတ်တိနှဈခုကို သိပွီဆိုရငျ အခု ဓာတျဆီအငျဂငျြထဲကို ဒီဇယျဆီမှားထညျ.ကွညျ.ပါမယျ ။
ဓာတျဆီအငျဂငျြထဲကို ဒီဇယျဆီထညျ.ပွီး စကျနိုးလိုကျရငျ ဘာဖွဈမလဲ ?
အဖွကေတော့ ဘာမှမဖွဈပါဘူး ။ သငျ့ကားအငျဂငျြ စကျနှိုးလာမှာမဟုတျပါဘူးခမြာ ။ စနဈတကပြွနျရှငျးပွပါမယျ ။ ဓာတျဆီအငျဂငျြမီးလောငျပေါကျကှဲပုံက ဓာတျဆီနှငျ့လေ အရောအနှောတှကေို အငျဂငျြထဲထညျ. ဖိသိပျပွီး ပလကျကနမေီးပေါကျပေးပွီး မီးလောငျပေါကျကှဲမှုဖွဈစတောပါ ။ ဒီလိုအငျဂငျြလညျပတျမှုဖွဈစဉျဖွဈစဖေို.
ဓာတျဆီကိုက သူ.ဂုဏျသတ်တိအရ လနေဲ.ရောနှောရငျ အဆငျပွစေဖေို. အငှေ.ပြံလှယျတဲ့စှမျးရညျသတ်တိရှိပါတယျ ။ ဒီလိုအငျဂငျြထဲကို အငှေ.မပြံလှယျတဲ့ ဒီဇယျထညျ.လိုကျတဲ့အခါ ဒီဇယျ ဟာ အငှေ.မပြံဘဲ အရတှေအေဖွဈနဲ.ပဲတညျရှိနလေို. လနေဲ.အရောအနှောမှာ ပေါကျကှဲမီးလောငျစဖေို. ဘယျလိုမှမလှယျကူစပေါဘူး ။
နောကျတခကျြက ဓာတျဆီရဲ. မီးလောငျလှယျနိုငျစှမျးပမာဏက မွငျ့မားပွီးသားမို. အငျဂငျြတညျဆောကျပုံကိုက အပူခြိနျမြားစတေဲ့ တမငျဖိနှိပျမှုမြားတှမေပါဝငျပါဘူး ။ ဒီတော့ ဒီလိုအငျဂငျြထဲမှာ မီးလောငျမလှယျနိုငျတဲ့ ဒီဇယျဆီဟာ မီးလောငျဖို.လိုအပျတဲ့အပူခြိနျမရရှိလို. မီးလောငျကြှမျးဖို.မဖွဈနိုငျပါဘူး ။
ဒီတော့ ဓာတျဆီအငျဂငျြထဲ ဒီဇယျထညျ.မိပွီး စကျနှိုးလိုကျရငျ ဘာမှမဖွဈနိုငျပါဘူးခမြာ ။ ဓာတျဆီကားမောငျးသူတှကေံကောငျးပါတယျ ။ မတျောမှားထညျ.မိရငျ စကျနှိုးမရတာကလှဲလို. အငျဂငျြမထိခိုကျဘဲ ဆီတိုငျကီ ထဲက ၊ ပိုကျလိုငျးတှထေဲက မှားထညျ.မိတဲ့ ဒီဇယျတှကေို ကုနျအောငျထုတျ ဓာတျဆီပွနျထညျ.မောငျးလို.ရပါတယျ ။ ကဲဓာတျဆီအငျဂငျြပွီးတော့
ဒီဇယျအငျဂငျြထဲကို ဓာတျဆီမှားထညျ.ပွီး စကျနှိုးမောငျးမိရငျ ဘာဖွဈမလဲ ? အဖွကေ ခတျေစကားနဲ.ပွောရရငျ မွှခွေောကျကိုကျသလိုပါပဲဗြာ ။ အငျဂငျြရယျ ဆကျစပျပစ်စညျးတှေ အကုနျဂနျ.သှားနိုငျပါတယျ ။ စနဈတကပြွနျရှငျးပွပါမယျ ။
ဒီဇယျအငျဂငျြမီးလောငျပေါကျကှဲမှု ဖွဈစဉျက ဒီဇယျအငျဂငျြထဲကို လတေမြိုးထဲကိုသာ Inlet ကနေ သှငျး ၊ အဲ့လိုကိုပဲ အပူခြိနျအမြားကွီးရအောငျ Piston ဖိအားတှနေဲ. အတငျးဖိသိပျ ၊ တျောရုံမီးမလောငျနိုငျ တဲ့ ဒီဇယျဆီတှေ မီးလောငျလောကျတဲ့ အပူခြိနျရောကျပွီဆိုမှ ဒီဇယျဆီတှကေို နျောဇယျကနေ သတျမှတျအတိုငျးအတာအဖွဈ အမှုနျအမှားလေးေ တှဖွနျးပေးခွငျးဖွငျ့မီးေ လာငျတာပါ ။
အဲ့လိုအငျဂငျြထဲကို မီးလောငျလှယျလှနျးတဲ့ ဓာတျဆီထညျ.ပါပွီတဲ့ဗြာ ။ အပူခြိနျ အနှုတျဒီဂရီမှာတောငျမီးလောငျနိုငျတဲ့ ဓာတျဆီဟာ မလောငျလောငျအောငျ အပူခြိနျနဲ.ဖိအားတှပေေးထာတဲ့ အငျဂငျြထဲမှာ စညျးမဲ့ကမျးမဲ့ အထိနျးအကှပျမဲ့ မီးလောငျကြှမျးမှု ( Uncontrolled Combustion ) ဖွဈပါတော့တယျ ။ အဲ့လိုဖွဈတဲ့အတှကျ အငျဂငျြသံမီးလောငျမှုကို နားမထောငျတဲ့
ယာဉျမောငျးနဲ.ဆိုရငျ သတိမမူမိဘဲ အခြိနျအတျောကွာမောငျးလိုကျမယျဆိုရငျပဲ အငျဂငျြအတှငျးက မီးလောငျခနျးသုံး ပစ်စညျးတှဖွေဈတဲ့ Piston , Valve , Cylinder Head , Cam Shaft အစရှိတဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှအေကုနျပကျြစီးပါမယျ ၊ ဝပျရှော့ပို.ပွီး အငျဂငျြခရြမယျ ။ အတှငျးပစ်စညျးတှအေကုနျပွုပွငျလဲလညျရနိုငျပါတယျ ။
ဒါတှငျပဲလားဆို မဟုတျသေးပါဘူး ။ ဒီဇယျအငျဂငျြမှာ သုံးနတေဲ့ နျောဇယျတှေ အငျဂကျြရှငျးပနျ.တှဟော ဒီဇယျရဲ. စေးပဈြမှု ခြောဆီသဘောကို မှီခိုပွီးရပျတညျနပေါတယျ ။ အဲ့လိုပစ်စညျးတှထေဲကို စေးပဈြမှုမရှိတဲ့ ဓာတျဆီထညျ.လညျပတျလိုကျတဲ့အတှကျ ခြောဆီစနဈပကျြစီးပွီး နျောဇယျတှေ အငျဂကျြရှငျးတှပေါ အပိုလိုကျဂနျ.ပါမယျ ၊ တခွား ရာဘာစီးတှမှောလညျး ဓာတျဆီဟာပြျောဝငျကုနျတာမို. အငျဂငျြတခုလုံးပကျြစီးမှုမြိုးစုံကွုံတှေ.ရပါမယျ ။
ဒီဇယျအငျဂငျြယာဉျမောငျးဆရာတှေ သတိပွုကွစလေိုပါတယျ ။ ဓာတျဆီမှားမထညျ.မိဖို.ရယျ မှားထညျ.မိရငျတောငျ စကျနှိုးပွီးပွီးခငျြသိပွီး အခြိနျမှီ အခွအေနမေဆိုးခငျရပျတနျ.ဖို.ရယျပါ ။
ဒီလောကျဆို ဆီမှားထညျ.တဲ့ ပွသနာကနေ အငျဂငျြတှဘောဖွဈနိုငျတယျဆိုတာ ကှဲကှဲပွားပွားသိလောကျပါပွီ ။ နောကျဆုံး သတိပေးခငျြတာက ဒီဇယျအငျဂငျြထဲ ဓာတျဆီ လုံးဝ (လုံးဝ)ထညျ.မောငျးလို.မရပါခမြာ ။
သင်ဟာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကားတစီးကို မောင်းနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းသူတယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကားကို မောင်းနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမယ် ။
သင့်ကား ဆီဖြည့်စဉ်မှာ ဆီဆိုင်က ဓာတ်ဆီကားကို ဒီဇယ်မှားထည်.လိုက်မိတယ် ၊ ဒီဇယ်ကားကို ဓာတ်ဆီမှားထည်.လိုက်မိတယ်ဆိုပါစို. ၊( ဖြစ်ခဲပေမယ့် ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ် ) ၊ သင်ကလည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဆီမှားထည်.လိုက်တာမသိဘဲ ကားစက်နှိုးလိုက်မိတယ်ဆို သင်ကားအင်ဂျင် ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ.ကျကျ ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ် ။
ဆီမှားထည်.တဲ့ ပြသနာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို မသိခင် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ. ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တို.ရဲ. မတူကွဲပြားတဲ့ အင်ဂျင်တည်ဆောက်ပုံ မီးလောင်ပုံလေးတွေကို သိထားရင်ပိုကောင်းပါတယ် ။
ကျနော်အရင်ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်မှာ ရှာဖွေဖတ်နိုင်ပါတယ် ။ အခုတင်ပြချင်တာက ဓာတ်ဆီနဲ. ဒီဇယ်ဆီတို.ရဲ. မတူကွဲပြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုပါ ။
အငွေ.ပျံလွယ်သည် ၊ ပုံမှန်အပူချိန်တွင် လွယ်ကူစွာ အငွေ.ပျံသည် ။ အရောင်မရှိ ၊ ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည် ၊ အနံ.အနည်းငယ်သင်းပျံ.သည် ။ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံးသော အပူချိန်လိုအပ်ချက် ( Flash Point ) = -10 to -15 ‘ C (or) 14 to 15 ‘ F နိပ်သောသိပ်သည်းဆ (0.60 to 0.78) ဆီနှင့်ရာဘာထဲသို. စိမ့်ဝင်နိုင်သည် ။
အပူချိန်ပမာဏ ( 9500 to 10500 Kcal / Kg 0r 4300 to 4800 Kcal / lb ) အေးနေသော အင်ဂျင်ကို စတင်နိုးချိန်တွင် လေနှင့်ဆီရောနှောမှုလွယ်ကူစေရန် လွယ်ကူသော အငွေ.ပျံစွမ်းရည်ရှိသည် ။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရန် အနိမ့်ဆုံးသော အပူချိန်လိုအပ်ချက် ( Flash Point ) မြင့်မားပြီး 40 to 100 ‘ C (or) 104 to 212 ‘ သိပ်သည်းဆ ( 0.82 to 0.86 ) အပူချိန်ပမာဏ အနီးစပ်ဆုံး ( 10500 ‘ Kcal / Kg or 4800 Kcal / lb ) နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အရည်အဖြစ်တည်ရှိနေရမည် ။
ဒီဇယ်သည် အင်ဂျက်ရှင်းပန်. ( Injection Pump ) နှင့် နော်ဇယ် (Nozzle ) များအတွင်းချောဆီအဖြစ်ဆောက်ရွက်ရသဖြင့် စေးပျစ်ပြီး ချောဆီဂုဏ်သတ္တိရှိရမည် ။ ဆီနှစ်ခုရဲ. မတူညီတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိနှစ်ခုကို သိပြီဆိုရင် အခု ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲကို ဒီဇယ်ဆီမှားထည်.ကြည်.ပါမယ် ။
ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲကို ဒီဇယ်ဆီထည်.ပြီး စက်နိုးလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ?
အဖြေကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။ သင့်ကားအင်ဂျင် စက်နှိုးလာမှာမဟုတ်ပါဘူးခမျာ ။ စနစ်တကျပြန်ရှင်းပြပါမယ် ။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲပုံက ဓာတ်ဆီနှင့်လေ အရောအနှောတွေကို အင်ဂျင်ထဲထည်. ဖိသိပ်ပြီး ပလက်ကနေမီးပေါက်ပေးပြီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေတာပါ ။ ဒီလိုအင်ဂျင်လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေဖို.
ဓာတ်ဆီကိုက သူ.ဂုဏ်သတ္တိအရ လေနဲ.ရောနှောရင် အဆင်ပြေစေဖို. အငွေ.ပျံလွယ်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိရှိပါတယ် ။ ဒီလိုအင်ဂျင်ထဲကို အငွေ.မပျံလွယ်တဲ့ ဒီဇယ်ထည်.လိုက်တဲ့အခါ ဒီဇယ် ဟာ အငွေ.မပျံဘဲ အရေတွေအဖြစ်နဲ.ပဲတည်ရှိနေလို. လေနဲ.အရောအနှောမှာ ပေါက်ကွဲမီးလောင်စေဖို. ဘယ်လိုမှမလွယ်ကူစေပါဘူး ။
နောက်တချက်က ဓာတ်ဆီရဲ. မီးလောင်လွယ်နိုင်စွမ်းပမာဏက မြင့်မားပြီးသားမို. အင်ဂျင်တည်ဆောက်ပုံကိုက အပူချိန်များစေတဲ့ တမင်ဖိနှိပ်မှုများတွေမပါဝင်ပါဘူး ။ ဒီတော့ ဒီလိုအင်ဂျင်ထဲမှာ မီးလောင်မလွယ်နိုင်တဲ့ ဒီဇယ်ဆီဟာ မီးလောင်ဖို.လိုအပ်တဲ့အပူချိန်မရရှိလို. မီးလောင်ကျွမ်းဖို.မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။
ဒီတော့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲ ဒီဇယ်ထည်.မိပြီး စက်နှိုးလိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခမျာ ။ ဓာတ်ဆီကားမောင်းသူတွေကံကောင်းပါတယ် ။ မတော်မှားထည်.မိရင် စက်နှိုးမရတာကလွဲလို. အင်ဂျင်မထိခိုက်ဘဲ ဆီတိုင်ကီ ထဲက ၊ ပိုက်လိုင်းတွေထဲက မှားထည်.မိတဲ့ ဒီဇယ်တွေကို ကုန်အောင်ထုတ် ဓာတ်ဆီပြန်ထည်.မောင်းလို.ရပါတယ် ။ ကဲဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ပြီးတော့
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲကို ဓာတ်ဆီမှားထည်.ပြီး စက်နှိုးမောင်းမိရင် ဘာဖြစ်မလဲ ? အဖြေက ခေတ်စကားနဲ.ပြောရရင် မြွေခြောက်ကိုက်သလိုပါပဲဗျာ ။ အင်ဂျင်ရယ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ အကုန်ဂန်.သွားနိုင်ပါတယ် ။ စနစ်တကျပြန်ရှင်းပြပါမယ် ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်က ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲကို လေတမျိုးထဲကိုသာ Inlet ကနေ သွင်း ၊ အဲ့လိုကိုပဲ အပူချိန်အများကြီးရအောင် Piston ဖိအားတွေနဲ. အတင်းဖိသိပ် ၊ တော်ရုံမီးမလောင်နိုင် တဲ့ ဒီဇယ်ဆီတွေ မီးလောင်လောက်တဲ့ အပူချိန်ရောက်ပြီဆိုမှ ဒီဇယ်ဆီတွေကို နော်ဇယ်ကနေ သတ်မှတ်အတိုင်းအတာအဖြစ် အမှုန်အမွှားလေးေ တွဖြန်းပေးခြင်းဖြင့်မီးေ လာင်တာပါ ။
အဲ့လိုအင်ဂျင်ထဲကို မီးလောင်လွယ်လွန်းတဲ့ ဓာတ်ဆီထည်.ပါပြီတဲ့ဗျာ ။ အပူချိန် အနှုတ်ဒီဂရီမှာတောင်မီးလောင်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ဆီဟာ မလောင်လောင်အောင် အပူချိန်နဲ.ဖိအားတွေပေးထာတဲ့ အင်ဂျင်ထဲမှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အထိန်းအကွပ်မဲ့ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ( Uncontrolled Combustion ) ဖြစ်ပါတော့တယ် ။ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် အင်ဂျင်သံမီးလောင်မှုကို နားမထောင်တဲ့
ယာဉ်မောင်းနဲ.ဆိုရင် သတိမမူမိဘဲ အချိန်အတော်ကြာမောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပဲ အင်ဂျင်အတွင်းက မီးလောင်ခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Piston , Valve , Cylinder Head , Cam Shaft အစရှိတဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပျက်စီးပါမယ် ၊ ၀ပ်ရှော့ပို.ပြီး အင်ဂျင်ချရမယ် ။ အတွင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ပြုပြင်လဲလည်ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒါတွင်ပဲလားဆို မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာ သုံးနေတဲ့ နော်ဇယ်တွေ အင်ဂျက်ရှင်းပန်.တွေဟာ ဒီဇယ်ရဲ. စေးပျစ်မှု ချောဆီသဘောကို မှီခိုပြီးရပ်တည်နေပါတယ် ။ အဲ့လိုပစ္စည်းတွေထဲကို စေးပျစ်မှုမရှိတဲ့ ဓာတ်ဆီထည်.လည်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက် ချောဆီစနစ်ပျက်စီးပြီး နော်ဇယ်တွေ အင်ဂျက်ရှင်းတွေပါ အပိုလိုက်ဂန်.ပါမယ် ၊ တခြား ရာဘာစီးတွေမှာလည်း ဓာတ်ဆီဟာပျော်ဝင်ကုန်တာမို. အင်ဂျင်တခုလုံးပျက်စီးမှုမျိုးစုံကြုံတွေ.ရပါမယ် ။
ဒီဇယ်အင်ဂျင်ယာဉ်မောင်းဆရာတွေ သတိပြုကြစေလိုပါတယ် ။ ဓာတ်ဆီမှားမထည်.မိဖို.ရယ် မှားထည်.မိရင်တောင် စက်နှိုးပြီးပြီးချင်သိပြီး အချိန်မှီ အခြေအနေမဆိုးခင်ရပ်တန်.ဖို.ရယ်ပါ ။
ဒီလောက်ဆို ဆီမှားထည်.တဲ့ ပြသနာကနေ အင်ဂျင်တွေဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိလောက်ပါပြီ ။ နောက်ဆုံး သတိပေးချင်တာက ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထဲ ဓာတ်ဆီ လုံးဝ (လုံးဝ)ထည်.မောင်းလို.မရပါခမျာ ။
Previous post ” Wisdom ရဲ့ အရေးကွီးပုံ ” နဲ့ ” Education ရဲ့ အရေးပါ ပုံ ”
Next post အိမျမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ LCD /LED TV မြား အခြိနျမတိုငျခငျ ပကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျပွီး သကျတမျးပွညျ့ အသုံးပွုနိုငျရနျအတှကျနညျးလမျး ကောငျးမြား